विद्या आन्टी र केपी अंकललाई अनुरोध– दासढुंगा प्रकरणको छानविन होस् – Kite Sansar
विद्या आन्टी र केपी अंकललाई अनुरोध– दासढुंगा प्रकरणको छानविन होस्
उषा न्यौपाने (जीवराज आश्रितकी छोरी)
३ जेठ २०५० सालको अत्यासलाग्दो दासढुंगा दुर्घटनामा बुबा जीवराज आश्रित र मदन भण्डारीको निधन भएको आज २७ वर्ष पूरा भएको छ । मदन–आश्रित बितेका यी २७ वर्ष हाम्रो परिवारको मात्र होइन, समग्र देशकै जीवन क्षतिग्रस्त भएजस्तो अनुभूति हुन्छ । उहाँहरु जीवित भएको भए, २०५२ पछि माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन र त्यसले उत्पन्न गरेका अरु राजनीतिक घटना हुन्थे वा हुन्थेनन्, अहिले अनुमान गर्न कठिन हुन्छ ।
बुबा र मदन अंकल पोखरा हुँदै चितवन जानुभन्दा अघिल्लो दिन १ जेठ ०५० मा काठमाडौमा भीषण वर्षा भएको थियो । हामी त्यतिबेला डल्लुमा बस्थ्यौं । बुबा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को पार्टी कार्यालय रहेको बागबजारबाट डेरा आउँदै गर्दा पानी परेकाले म छाता लिएर डल्लु पुल नजिक गएँ । उहाँ एउटा पसलमा ओत लागेर बस्नुभएको थियो । मैले बुबालाई छाता ओडाएर ल्याएँ । मेरो जीवनमा बुबासँगको त्यो नै अन्तिम यात्रा बन्न पुग्यो ।
बुबालाई पेटको रोग थियो । डा. सुन्दरमणि दीक्षितले अल्सर भइसकेको बताउँदै धेरै हिँडडुल नगर्न, बाहिर खाना नखान सुझाव दिनुभएको थियो ।
मदन अंकल र बुबा २ जेठमा पोखरा पुगेर हरि पाण्डेको घरमा बास बस्नुभयो । ३ जेठको बिहान खान खाएर अमर लामाले चलाएको जीपमा चितवन जाँदै गर्दा दासढुंगामा घटना भयो । मदन भण्डारी र बुबालाई हामीले सदाका लागि गुमायांै ।
आखिर त्यस्तै भयो, बुबा नभएपछि ममी, भाइ र मैले एकअर्काको हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।
२०४६ अघि पार्टीका अरु नेताजस्तै बुबा पनि भूमिगत हुनुभएका कारण हामीले उहाँको सानिध्य कमै पायौं । जनआन्दोलन सफल भएपछि मात्र हामी बुबासँग काठमाडौंमा बस्न पायौं ।
बुबा घरमा हुँदा सँधै बीबीसी रेडियो सुन्नुहुन्थ्यो । उहाँ पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको भेऊ हामीले २०४६ को जनआन्दोलन पछि मात्र पायौं ।
३ जेठ २०५० मा मदन–आश्रित सवार जीप त्रिशुलीमा खसेको पहिलो जानकारी हामीलाई प्रदीप नेपालको परिवारले दिएको थियो । त्यसअघि अपरिचित व्यक्तिले फोन गरेर जीप त्रिशूलीमा खसेको बताएको ममीले सुनाउनुभयो ।
दुर्घटनापछि हाम्रो डेरामा पार्टी नेता–कार्यकर्ता आउन थाले । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंह पनि आएर सान्त्वना दिनुभयो ।
दुर्घटना भएको पर्सिपल्ट बुबाको शव जीपभित्रै भेटियो । मदन भण्डारीको पनि शव भेटिएपछि काठमाडौं ल्याइयो । बागबजारको पार्टी मुख्यालय सानो भएकाले दिवंगत नेताद्वयको शव दशरथ रंगशालामा राखियो । पार्टीका नेताहरुले हामीलाई डेराबाट रंगशाला लगे ।
नेकपाको सरकारले मदन–आश्रितप्रति अर्पण गर्ने यो भन्दा सच्चा श्रद्धाञ्जली अरु हुनै सक्दैन ।
हातखुट्टा घिसार्दै जीन्दगी लतार्ने शारदाको संघर्ष : कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ?
रामारोशन गाउँपालिकालाई जनपरिषद अछामको चेतावनी